Xawligii uu ku Socday Horumarinta Hidaha iyo Dhaqanka Degaanka Somalida Ethiopia oo Gaabiyey – Rasaasa News
Xawligii uu ku Socday Horumarinta Hidaha iyo Dhaqanka Degaanka Somalida Ethiopia oo Gaabiyey
Jijiga, Mar 8, 2012 [ras] – Waxaa mudo sanad iyo badh si xawliya ku socday barnaamij ay waday dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo lagu uruurinayey laguna hirgalinayay hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee degaanka.
“Reer guurayiyo gabdha timo tidcani waa wax dhulkeena u gaar ahee la inagu gartaa” [mp3player width=200 height=20 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://rasaasa.com/geed.mp3]
Dadweynaha degaanka Somalida ayaa meel kasta oo ay joogaan soo dhaweeyeen talaabooyinka ay qaaday dawladu ee ku saabsan uruurinta iyo hirgalinta hidaha iyo dhaqanka, arintaas oo runtii soo celisay sharafta degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa la filayey in ay dawladu uruurin doonto hal abuurka degaanka, dadka aqoonta u leh dhaqanka iyo hidaha iyo fanaaniinta, si loogu reebo dhaxal u hadha dhalinyarada musaqbalka.
Degaanka Somalida Ethiopia waa meelaha asalka u ah hidaha iyo dhaqanka Somalida, maadaamada uu degaanka Somalidu hore u ahaa meel dhibaato waxay marti u noqodeen suugaanleydii iyo hal abuurkii degaanka Somalidu gabalada Somaliyeed ee la dariska ah degaanka Somalida [Ogaden], runtiina waa la bililiqaystay.
Suuganta iyo hal abuurku waxay ka mid yihiin hantida dalka la,aanteeduna waa fakhri, Jiritaanka dadku waxay ku xidhan tahay balaadhka hidaha iyo dhanka ay leeyihiin.
Degaanada kale ee Ethiopia waxay ku faanaan dhaqanka, kolka uu ruux ajnabi ah marti u noqdo waxa ugu horeeya ee ay baraan waa dhaqankooda sida cuntada iyo dharka iyo suugaanta, taas oo tusaysa jiritaankooda iyo ilbaxnimadooda.
Dadweynaha degaanku waxay rajo wayn ka qabeen in ESTV oo keeni doono isbadal weyn oo xaga dhaqanka Suugaanta ah, uu noqon doono mid sii daaya aqoonta hidaha iyo dhaqanka sida gabayada, ciyaaraha iyo murtida.
Hidaha iyo dhaqanku waxay qayb ka qaataan horumarinta waxbarashada iyo taariikhda dalka. Kol hadii uu sidaas muhiim u yahay waxaa muhiim ah in dawladu ay galiso awood abuurida gudiyo uruuriya soona saara waxyaabo dhaxal ah.
Waxaad moodaa in saxaafada dawlada degaanku ay cawod ku tahay dhaqanka. Wargayska kaliya ee dawlad afkeeda ku hadla cakara.com sawirada dhaqanka iyo kuwa madaxda ee ay ka sii faa,iidaysan lahaayeen ajnabiga iyo dadka wax qora sumcadna u noqon lahaa degaanka, waxay ku dul qoraan far si aan loo qaadan. Ujeedadoodu waa dhaqan gudhis iyo aqoon gaabni.
Inkasta oo dhaqankaas ay la wadaageen, waxaa xusid mudan labo ruux oo degaanka ah oo marka laga reebo madaxda dawlada isku hawlay wax ka qabashada hirgalinta farshaxanka, hidaha iyo dhaqanka degaanka Somalida Ethiopia, kuwaas ah Guuleed Casoowe wasiirkii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska iyo hal abuure Baarleex.
Xuska Maalinta Haweenka Adduunka March 8, 2012